Burco magaalo camiran oo bulsho badan Haddana adeegyo badan tabeysa! | Saxil News Network
Burco magaalo camiran oo bulsho badan Haddana adeegyo badan tabeysa!
June 6, 2022 - Written by admin
W/Q; Rakad Maxamed Suldan Xasan Doolaal
Burco waa magaalo aad u camiran, bulshadda ku dhaqana ay tiro ahaan aad u badan yihiin , fadhiga Makhaayaduhuna aad u camiran yihiin Adeegyadda Shaaha Kariska ahina ku badan yahay halka uu ku yar yahay Makhaayaddaha iyo Goobaha Coffeega iyo Bunka u gaarka ahi.
Waa magaalo Dhallinyaradda ugu badan ku shaqeystaan darawalnimo iyaga oo wata gaadiidka Vitsk, Tigta, Basaska iyo gaadiidka waaweyn, Dhaqaalaha koowaad ee soo galaa wuxuu ka soo galaa Sayladda Xoolaha ee Burco, waxaana ku xiga Gaadiidka kala duwan ee lagu shaqeysto iyo ganacsiyadda Dhexe ee suuqa.
Waxaa Burco iyana ku yaalla suuq kamida kuwa ugu waaweyn degmooyinka soomaalidu degto suuqaas oo aad uga qiimo jaban suuqyadda kale wax badan oo u gaar ahna aad ka helaysid.
Nolosha Burco runtii waa nolol aad u wanaagsan waa magaaladdii MARTIDA, Waa magaaladdii xoriyadda waana magaalo u baahan in shaqooyin loo abuuro si camal la’aanta baahsan hoos loogu dhigo adeegyo badanna la soo gaadhsiiyo.
Qaab ahaan Waa magaalo u isku siman oo aan kala sareyn sida Hargeysa, waana meel aan buuro lahayn una badan dhul ciideed isku siman waxayna caan ku tahay oo laga helaa Hilib aad u macaan oo Adhi iyo geel u badan kaas oo dadka intooda badani cunaan Hilibkaas noocyadiisa kala duwan waxaana imika socda fahanka kalluunka oo aad arkaysid sida ay u dalbanayaan cunistiisa.
Burco waan jecelnahay se waxay Burco ku sii noqonaysaa iyadoo fadhiga laga kaco oo dhexda loo xidho danta guud iyo ta gaarka ah si dadku camal gacmahooda ugu sameystaan hadday Beero yihiin ama ay adeegyo kala oo warshaddo ah yihiin.
Markii aan waydiiyey dadka reer Burco ganacsiyadooda siday u hawlgalaan waxay ii sheegeen in ganacsadaha 50.000$ Helaaba uu Hargeysa u guuro isagoo leh caasimadda ayay shaqo taalaa “Xigasho”. Oo ay ka shidan tahay.
Burco waxay tabaysaa Goobihii ganacsiga ee Coffeega, Goobihii Gymka oo casri ah, goobihii Play ground ka carruurta, goobo dalxiis oo u
U gaara oo dalxiisayaal keeni karta.